Obama hanao lahateny ao Maraoka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 12:22 GMT
Ity tranonkala Maraokanina marani-tsaina ity — Obama mba hiresaka any Maraoka — dia manao dokambarotra ity firenena ity ho toy ny kandidà tsara indrindra ho an'ny kabary Islamika manerantany nataon'i Obama. Namolavola ny hafatro momba io lohahevitra io mihitsy aza izy ireo. Mariho fa tsy manana fifandraisana [sic] amin'i “Obama hiresaka any Maraoka aho”, na inona na inona, ary mampiasa ity bilaogy ity sy manoratra amin'ny anaran'ny tenako manokana sy tsy misy olon-kafa, ary tsy mahazo fanomezana ara-bola na ara-pitaovana na tambiny avy amin'ny olona na fikambanana.
Ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaoginy, Tidinit mamaly hoe:
Mahaliana. Tsy namaky ny lahatsoratrao momba an'i Obama, fa hamaky aho ankehitriny, noho ny fiantraikany amin'ny firenentsika “an'ady”. Aza manahy raha voampanga ho mitanila ianao. Fantatray fa tsy manao izany ianao ary manome anay sakafo sasany ho fisaintsainana momba ny olana mifandraika amin'ny faritra ianao. Tena nankasitraka ny lahatsoratra navoakanao taloha momba an'i Torkia aho ary ny consortium gazy OPEP vaovao. Ankoatra izay, mazava ho azy: Ya Khattou, Al Majlissi sy ny lahatsoratrao mahafinaritra novaliako. Izany no antony hijereko saika isaky ny maraina na alina. Tohizo fa tsara. Mila anao izahay ary manokatra ny masonay amin'ny olana fototra sasany tsy resahin'ny olona ianao.
Ny fangatahana ho an'i Obama mba hiresaka any Maraoka dia niainga tamin'ny The Moroccan American Board, fikambanana ao Washington, D.C.
Ireto manaraka ireto ny resaka lehibe tamin'ny fanentanana:
Izao no antony tokony hoe any Maraoka izany
Inona no iantsonao ny firenena Arabo, Silamo ary Afrikana izay voalohany nanaiky ny fahaleovan-tena Amerikana?
Ahoana no iantsonao ny firenena mahalala onony, mandefitra, milamina izay mpiara-miasa akaiky indrindra amin'i Etazonia ao amin'ny faritra?
Ahoana no iantsoanao ny lahatenin'i Obama voalohany any Maraoka aorian'ny anokanana azy?
Na dia ny fotoana ihany aza no hilaza, hatramin'izao dia nahomby ny fampielezan-kevitra; nampanasonia ny ben'ny tanànan'i Washington D.C Adrien Fenty mihitsy aza ireo mpanao fanangonan-tsonia mba hanohana izany tamin'ny fetin'ny andro nahaterahany:
Anisan'ireo nasaina sy mpandray anjara ireo mpikambana tao amin'ny Washington Maroccan Club sy ny naman'ny ben'ny tanàna izay ni-karajia tamin'ny ben'ny tanàna ary nampahafantatra azy ny fanentanana hisarika ny filoha voafidy Barack Obama hanao ny lahateniny voalohany momba ny politika ivelany avy any Maraoka. Ny ben'ny tanànan'i Washington, Adrien Fenty, dia nilaza fa “hevitra tsara izany, Maraoka no toerana tsara indrindra ho amin'izany lahateny izany” Tamin'ny fihaonana nanaraka tamin'i Jan sy i Phil Fenty, ireo ray aman-dreny mirehareha amin'ny ben'ny tanàna izay tonga tamin'ny fety tsingerintaona faha-38 taonan'ny ben'ny tanàna. Izy ireo no mitantana ny magazay fivarotana kiraro fihazakazahana Fleet Feet ao Washington nandritra ny 24 taona, ary i Jan Fenty kosa, renin'ny ben'ny tanàna, dia niasa ho mpampianatra sekolim-panjakana DC. Nampandre ny mpikambana ao amin'ny Fiarahamonina Maraokana ny rainy, Phil Fenty fa teratany Maraokana ny raibeny. Gaga ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona tamin'izany vaovao tsy nampoizina izany ary nanaiky avy hatrany ny ben'ny tanàna sy ny fianakaviany tao amin'ny fiarahamonina Amerikana Maraokana satria Maraokana ny rain'ny raiben'ny ben'ny tanàna ary nankalaza ny hetsika tamin'ny veran-drano mineraly mendrika sy mangatsiatsiaka.